नेपाली ल्यापटप बजारमा बढी चलेका ल्यापटप हुन् डेल, एचपी र एसर लगाएत । यी बाहेक दर्जन ब्राण्डका ल्यापटप बजारमा पाइन्छन् । विश्व बजारमा दर्जनौं ब्राण्डका बहुउपयोगी स्मार्टफोन र ट्यावहरुसमेत आउने गरेका छन् । यसले ल्यापटप मार्केट घट्ने अनुमानसमेत गर्ने गरिन्छ । यसका बाबजुद ल्यापटपमै भविष्य देखेर लगानी थप्नमा पनि प्रविधि कम्पनीहरु अग्रसर देखिएका छन् ।
विश्व बजारमा मात्र नभइ नेपालमा पनि आक्रामक बजार विस्तारसहित असुस कम्पनीले ल्यापटपहरु ल्याएको छ । प्रविधि क्षेत्र स्मार्टफोन केन्द्रीत भइरहँदा असुसले आफ्ना नयाँ उत्पादनहरु नेपालमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै सार्वजनिक गरको छ । यसै साता ‘दि ल्यापटप अफ टुमरो’ नारा सहित राजधानीको मेरियट होटेलमा भव्य कार्यक्रमकाबीच जेनबुक प्रो डुओ र जेनबुक डुओसहितका नयाँ ल्यापटपका मोडेलहरु सार्वजनिक गरेको छ । प्रविधि बजारमा ल्यापटपको भविष्य अझै छ भन्ने सन्देश दिइरहेको असुसले भविष्यको ल्यापटप बजारको लिडरको रुपमा आफूलाई दाबी गर्दै नयाँ ढंगबाट बजारमा आएको छ ।
चार लाख मूल्यसम्म महंगो ल्यापटप नेपाली बजारमा कति विक्री होलान् ? असुसले सार्वजनिक गरेको प्रो मोडेलका ल्यापटप बजारमा आएपछि गरिने प्रश्न हो यो । प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । तर यी महँगा मोडेल सामान्य नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि भने होइनन् । यद्यपी महँगा ल्यापटप पनि नेपालमा नबिक्ने भने होइनन् । एप्पलका म्याकबुक र सात लाखसम्म पर्ने एप्पलकै आइम्याकहरु पनि नेपाली बजारमा छन् । खासगरि ग्राफिक्ससँग सम्बन्धित काम गर्नेका लागि उच्च क्षमताका ल्यापटप आवश्यक पर्छन् । नेपालमा पनि ग्राफिक्ससँग सम्बन्धित काम धेरै हुन गरेका छन् र अझै थपिने पनि देखिन्छ । किनकी डिजिटल नेपाल सरकारको योजना भित्र छ र डिजिटल सामग्री उत्पादन गर्न उच्च प्रविधि जडित ल्यापटपहरु पनि सहयोगी हुन सक्छन् । खासगरी डिउल मोडलका ल्यापटप भने अलिक फरक र गजबका छन् । ग्राफिक्समा काम गर्नेहरुलाई आरामको अनुभूति दिने खालको डिउल स्क्रीन फिचर र विश्वमै तिब्र गतिको, उच्च क्षमताको ल्यापटप उत्पादन गर्ने कम्पनीको पहिचान भएकाले पनि प्रोफेसनल उपभोक्ता पनि असुसतिर तानिन सक्ने पनि देखिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली बजार चीन र भारतीय बजारबाट प्रभावित हुने गर्दछ । असुसले भारतमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर बजार विस्तार गरिरहेको हुनाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान गरियो भने पनि गलत नहुन सक्छ ।
कस्तो कम्पनी हो असुस?
यसो त असुस नसुनिएको नाम भने होइन । विश्वमा असुसको उत्पादनहरु आउन थालेको तीन दशक पुग्दैछ । नेपालमा पनि १३ वर्षदेखि ल्यापटप बजारमा छ । यसो त पछिल्लो समयमा जेनफोन ब्राण्डमा स्मार्टफोन बजारमा पनि असुसको उपस्थिति छ । तर, यसको परिचय भनेको ल्यापटप र यसका एक्सेसेरिजहरु नै हो । मदरबोर्ड, कम्प्युटर, मनिटर, ग्राफीक्स कार्डहरु र राउटरका लगाएतका प्रविधिमा बजार हिस्सा बढाइरहेको कम्पनी असुसले अनुसन्धानलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । विश्वभर ५ हजार भन्दा बढि अनुसन्धान तथा विकासमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरुको साथले कम्पनीले प्रविधि क्षेत्रका नयाँ आविश्कारहरुलाई विश्वमा ल्याउने गरिरहेको छ । कटिङ एज डिजाइन र आविश्कारिक निर्माणमार्फत यो उद्योगमा अग्रणी नै मानिन्छ । सन् २०१८ मा ११ वटा प्रतिष्ठित अवार्डहरु जितेको थियो भने फोब्र्सको ग्लोबल २००० टप मध्येमा परेको थियो । यसका साथै थोमस रोयर्टस टप १०० ग्लोबल टेक लिडर्स र फच्र्यूनको वल्र्डस मस्ट एडमायर्ड कम्पनीजमा असुसको नाम लिस्टिङ गरेको थियो । खासगरि गेमिङ ल्यापटप बनाउनेमा असुसलाई विश्वभर नै बढी चिनिने गरिएको छ ।
एप्पलको म्याकबुक भन्दा महँगो असुस प्रो मोडेल
नेपालका लागि असुुसको आधिकारिक विक्रेता नागमणी इन्टिरनेशनलले ३० हजारदेखि ४ लाखसम्मका ल्यापटप नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ । खासगरि यसैसाता नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको प्रो मोडेलका ल्यापटप भने एप्पलका म्याकबुक भन्दा महँगोसमेत पाइएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको असुसको जेनबुक प्रो डुओ (युएकस ५८१) को मूल्य ३ लाख ३५ हजार तोकिएको छ भने जनेबुक डुओ (युएक्स ४८१) को २ लाख ५ हजार रहको छ । जेनबुक १५ को एक लाख २४ हजार ९९० र जेनबुक १४ को एक लाख १५ हजार छ ।
जेनबुक प्रो डुओ र जेनबुक डुओ कीबोर्ड र सेकेण्डरी टचस्क्रीन भएका ल्यापटप हुन भने बाँकी सिंगल स्क्रीन छन् । जेनबुक प्रो डुओमा फोरके यूएचडी ओएलईडी डिस्प्लेसहितको फुल वाइड ४के आसुस स्क्रीनप्याड प्लस छ भने जेनबुक डुओमा १०८० पिक्सेल फूलएचडी एलसिडी डिस्प्ले सहितको फुल लेन्थको १९२० पिक्सेल असुस स्क्रीनप्याड प्लस छ । यसमा जडित एप स्वीचर, भ्यूम्याक्स र टास्क स्वाप जस्ता अन्य केहि उपयोगी क्वीक कन्ट्रोल लगाएतका फिचरले प्रो डुओ र जेनबुक डुओको मुख्य स्क्रीन र स्क्रीनप्याड प्लस दुबैको एकै पटक उपयोग गर्न सकिन्छ । सिनेमा ग्रेड १००प्रतिशत डिसीआई पी३ कलर गामुट र १००,०००ः१ कन्ट्रास रेसियो लगाएतका उच्च फिचर रहेको ल्यापटपको स्क्रीन टू बडि रेसियोलाई करिब ८९ प्रतिशत छ भने एलसिडी डिस्प्लेले प्यानटन भ्यालिडेसनका साथ १०० प्रतिशत एसआरजीबी दिनेछ ।
प्रोको पहुँचमुनीका जेनबुक १४ र १५
असुसले सार्वजनिक गरेका मुख्य मोडेलमध्ये प्रो मोडेल महँगा र धेरै पावरफुल मोडेल छन् । तर, प्रोमा पहुँच नहुने वा त्यति धेरै सुविधा आवश्यक नपर्ने तर केही प्रोफेसनल काम गर्नेका लागि जेनबुक १३(यूएक्स३३४),जेनबुक १४ (यूएक्स४३४) र जेनबुक १५ (यूएक्स५३४) राम्रो विकल्प बन्न सक्छन् । यी मोडेल टेन्थ जेनेरेशनको (यूएसक्स ३३४) माइक्रोसफ्ट अफिस एच एण्ड एस सुविधा रहेका छन् । जेनबुक १३ मा ८ औं पुस्ताको इन्टेल कोर आई सेभेन क्वाड कोर सिपियू, एनभिडिआ जीफोर्स एमएक्स२५० ग्राफिक्स, १६ जीबी ¥याम र अल्ट्राफास्ट १ टेराबाईटको एसएसडी र गीगाबाइट क्लासको वाईफाई ६ छ भने असुस जेनबुक १४(यूएक्स४३४) र जेनबुक १५ (यूएस५३४) पातलो, हलुका र कम्प्याक्ट ल्यापटपको रुपमा देखिएका छन् ।
एनसेलको इन्टरनेट शुल्कमा २५% छुट
एनसेलको आफ्नो नेटवर्कको नाम ३ स्टेहोम